General Shortcuts .01...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ General Shortcuts လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အရင်တင်ပေးထားတဲ့ လင့်တွေက ပျက်သွားလို့ ပြန်ပြီးတင်ပေးပေးလိုက်တာပါ...! Shortcut သုံးနည်းလေးတွေ လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အဆင်ပြေလိမ့်မည်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...! အသုံးလိုရင်တော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...!
" Mediafire..." " Minus..." ( 2.47 MB ) အသိပညာ အတတ်ပညာ တိုးပွားနိုင်ပါစေ...!
No Response to "General Shortcuts .01...!"